आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा : के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने ? « Kakharaa
आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा : के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने ?
काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक डेढसयभन्दा धेरै कोभिड १९ का संक्रमित देखिन थालेपछि सरकारले आजदेखि निशेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले आजबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् । निषेधाज्ञासँगै नागकिरले गर्न पाउने र गर्न नपाउने कामको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
अत्यावश्क सेवा बाहेकका सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने ।
औषधी, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवासम्बन्धि काममा बाहेक कुनैपनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने ।
अत्यावश्यक सामाग्री लगायतका मालवाहक ढुवानीका साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाहेक अन्य सवारी साधन काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न नपाउने ।
सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नपाइने ।
कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिम त्रियन्त्रण, यसको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा खटिनुपर्ने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अन्य कार्यालयमा आउन जान पर्ने राष्ट्रिसेवक कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्युनतम कर्मचारी संख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको फोटोसहितको परिचयपत्रको आधारमा सञ्चालन हुने सवारी साधन बाहेकका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने
सवारीसाधन सञ्चालनको लागि पूर्व अनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा अन्तरगत पर्ने, औषधी, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्याँस, तरकारी, फलफूल, दुध, विद्युत दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वरेण्टिन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने आउने बिरामी, मृत्यु संस्कार लगायत अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनपर्नै काममा प्रयोग गर्ने सवारीसाधन जस्ता अति आवश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन चलाउन नपाइने ।
कुनै मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न मानिस भेला÷जम्मा हुन, भिडभाड गर्न सभा जुलुस गर्न नपाइने ।
परम्परागत रुपमा भई आएका दैनिक रुपमा हुने आन्तरिक नित्य पूजा बाहेकका सम्पुर्ण धार्किक सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन तथा जमघट गर्न नपाइने ।
शैक्षिक संस्था प्रशिक्षण केन्द्र, ट्यूशन सेन्टर, भाषा कक्षा लगायतका जमघट हुने गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने ।
सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सपिङ् मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मनोरञ्जनस्थल, शैलुन, व्यूटिपार्लर, स्पा, स्वीमिङ्ग पुल, जिमखाना, समुहमा खेलिने खेलकुद, पुस्ककालय, संग्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न नपाइने ।
फुटपाथ वा खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा कवाडी संकलन गर्न नपाइने ।
होटल, रेष्टुरेण्ट खोल्न नपाइने ।
के के गर्न पाइन्छ ?
बैंकिङ सेवा लगायत विभिन्न निकायले भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । सो सम्भव नभएमा नेपाल राष्ट्रि बैंकले तोकेको संख्यामा सीमित रही आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सकिने ।
अत्यावश्यक कार्यका लागि घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्ने र न्युनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने ।
हवाई उडानबाट विदेश जानेको हकमा सापपोर्ट, भिषा, स्वीकृत हवाई टिकट हुनेहरु सिधै एयरपोर्ट जाने सवारीसाधनको हकमा सहजीकरण गर्न सकिने ।
निषेधाज्ञामा गर्न नपाइने काम गर्नेलाई के कारबाही हुन्छ ?
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने मुल्यवृद्धि गर्ने जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।
यो आदेशको उल्लंघन गर्ने वा आदेशको पालना गर्ने गराउने काममा अवरोध गर्ने जोसुकै उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण समग्र क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका बावजुद यस आदेशको पुर्ण पालना गरी गराई कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्ने यस अभियानमा सदाझै निरन्तर सहयोग, साथ सहभागिताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकलाई हार्दिक अनुरोध गरेका छन् ।